वीरगन्जमा कोरोनाले थप चार जनाको मृत्यु–Samacharpati
४ असोज वीरगन्ज : वीरगन्जमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणका कारण थप ४ जनाको मृत्यु भएको छ। तीन जनाको आइतबार बिहान र एक जनाको शनिबार साँझ मृत्यु भएको हो। वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत रौतहटको गौर नगरपालिका-१ का ६१ वर्षीय पुरुषको आइतबार बिहान साढे ७ बजे मृत्यु भएको हो।
श्वासप्रश्वसमा समस्या भएपछि भदौ ३१ गते उनलाई नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको स्वाब परीक्षणको क्रममा शनिबार नै पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो।
यस्तै वीरगजस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले बाबा होटलमा सन्चालन गरेको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत बाराको कलैया उपमहानगरपालिका-१३ बलिरामपुरकाख ६५ वर्षीय पुरुषको आइतबार बिहान ५ बजे मृत्यु भएको हो।
मधुमेह र मुटुरोगी रहेका ती वृद्धमा श्वासप्रश्वासको समस्या भएपछि उनलाई असोज १ गते बाबा होटलको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा उनको आइतबार बिहान ५ बजे मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य निरिक्षक जयमोद ठाकुरले जानकारी दिए।
वृद्धलाई असोज २ गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा उनको स्वाब संकलन गरेर पीसीआर गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनको आइतबार बिहान १ बजे मृत्यु भएको ठाकुरले जानकारी दिए।
यस्तै मेडिकल कलेजको बाबा होटलमा सन्चालित अस्थायी कोभिड अस्पतानलमा वीरगन्ज ४ बिर्ताका ७८ वर्षीय वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ। ती वृद्धको शनिबार अपरान्ह ४ बजे मृत्यु भएको ठाकुरले जानकारी दिए।
योसँगै वीरगन्जमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६६ पुगेको छ। साउन यतामा मात्रै ६२ जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगन्जमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएका ६६ मध्ये २ पुरुषसहित पर्साका ४५ जना, बाराका १५ जना, रौतहटका ५ जना र सर्लाहीका एक जना रहेका छन्।
आइरिस ट्यालेन्ट नेशनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सयोग बिक्रमले सबै नेपालीबाट सहयोगको अपेक्षा
मानिस मरिसकेपछि अन्तिम संस्कार गर्न दिनु पर्दैन ! किन बिरोध गरेको ! हेर्नुहोस कारण त यस्तो पो रहेछ